बेवारिसे अर्थतन्त्र, ज्याला वृद्धिको माग र नवउदारवाद
डा. शूरवीर पौड्याल
आजकाल नेपाली राजनीति मात्रै होइन, अर्थतन्त्र पनि अलमलमा छ । अझ भनौँ अर्थतन्त्र त बेवारिसे नै भएको छ । जेठी र कान्छी जोईको मागजस्ता कुरामा संविधानसभाको चुनाव हुनेमा अलमल छ । उता अर्थतन्त्र भत्के पनि बिग्रे पनि हामीलाई केको चासो भनेझैँ सबैतिरबाट देखिएको छ । राजनीतिकर्मीलाई मन्त्री हुने धोको छ । सत्ताबाहिर रहेको पीडा नेतालाई छ । उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको चासो नहुने नै भयो । कर्मचारीलाई तलब पाकेकै छ, चिन्ता हुने कुरो भएन । बरु उसलाई अब आउने बजेटमा तलब बढ्दैन कि भन्ने चिन्ता छ । बरु भन्सार जस्तो कमाइ हुने ठाउँमा सरुवा भएन भन्ने चिन्ता छ । लुटेराहरूले लुट्न पाएकै छन्, उनीहरूलाई त्यसैमा हाइसञ्चो छ । थरीथरीका अपराधकर्मीका व्यवसाय मौलाएका नै छन् । उनीहरूलाई यसैपनि रामराज्य नै छ र सम्मानित नागरिकको पगरी भिरेकै छन् । बैंकमारा उद्योगी तथा निक्षेपकर्ता र साना लगानीकर्तामारा बैंकरलाई जहिले पनि अर्काको पैसामा मस्ती छँदै छ । फट्के साक्षीको किनारामा राष्ट्र बैंक छँदै छ । एक दुई यस्तालाई वेलामौकामा यसो कारबाही गर्‍यो वाहिवाही पाइएकै छ । लिनेदिने ब्याजदरमा अन्तर जति भएपनि के फरक पर्छ ? असलमा भाषण गर्ने विषय त मिलेको छ । हिजो बैंक मारेर, भ्रष्टाचार वा कालोबजारी गरेर बनेका नवधनाढ्यलाई पनि अर्थतन्त्र बिग्रनु भत्कनुसँग मतलव हुने कुरो पनि भएन । अनेकथरीका विदेशी सामानको उपभोग स्वदेशमा गर्न पाइएकै छ । स्वर्गीय आनन्द यही छ । आसेपासे, झोले, ढोके, हुक्केहरूको शक्तिकेन्द्रको पछिपछि कुद्ने धर्म हो । त्यसअनुसारको कर्म गरेका नै छन् । उनीहरूलाई पनि हाईसञ्चो नै छ । बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू कोही बुद्धिको खेतिपाती र व्यापारमा लागेका छन् भने कसैलाई राजनीतिक दलका झोला बोकेर कुद्दैमा फुर्सद मिलेको छैन । उनलाई पो केको खाँचो अर्थतन्त्र बिग्रेभत्केको । गरिबहरू गरिब नै छन् । उनीहरू गरिब छन् र त गरिबी निवारणको निम्ति पैसा आउँछ । त्यो पैसा कति टाठाबाठाको खल्तीमा पर्छ, कति गरिबसम्म झर्छ, देखिएकै छ । बुझिएकै छ । त्यसैले गरिबी निवारण टाठाबाठाको हितमा छैन । गरिबलाई साँझ–बिहानको चाहाराको जोहो गर्ने चिन्तनबाट फुर्सद नै कहाँ छ र ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उनीहरूको चिन्तनमा पर्दैन । उनीहरूको आफ्नै सानो अर्थतन्त्र छ । त्यसमा थोरै इन्धन, अलिकति आलु, साग र मोटो चामल, दसंैमा बालबच्चालाई नयाँ लुगा र मासुभात, जहान र बालबच्चाको दैनिक पालनपोषण खर्च पर्छ र उनीहरूले पसिनासँग साटेको ज्याला आउँछ । जो हात्तीको मुखमा जिरा हुन्छ र त्यसैको चिन्ता छ ।आजकाल त्यही ज्यालाको चर्चा छ, सहरबजारमा । बेलगाम बढेको बजारभाउको अगाडि ज्याला वृद्धिको माग कहिल्यै अन्यथा हुन सक्दैन । त्यसमा पनि श्रमजीवी कामदारको एउटा मात्रै बाँच्ने आधार श्रम भएकाले जीवन धान्न पनि नपुग्ने ज्यालामा मोलमोलाइ गर्नु व्यवसाय सञ्चालकको सामाजिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको कुरो हो । श्रमिकले ज्याला मात्रै लिँदैन, उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग पनि गर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु भएन । त्यस्तै राजनीतिका चार ठूला दलको सिको गरेर व्यवसायीले पनि कतिपय श्रमिक संगठनलाई बेवास्ता गरी अगाडि बढ्नु राम्रो होइन, त्यसलाई सच्याइनुपर्छ । यसरी ज्याला वृद्धिको माग आधारभूत जीविकासँग गाँसिएको छ । तर, ज्याला वृद्धि जीविकाको एउटा पाटो मात्रै हो । बजारभाउको नियन्त्रण यसको अर्को पाटो हो । नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ बजारभाउको नियन्त्रण कागजमा हुन्छ । बजारमा हुँदैन । यस विषयमा सरकार र त्यसका संयन्त्र कहिल्यै गम्भीर भएनन् । त्यसको कारण छ । सत्तामा बसेर कमाउनेहरूका निमित्त समाजमा गरिबी आवश्यक भएजस्तै कालाबजारी पनि आवश्यक छ । गरिबीबाट जस्तै कालोबजारीबाट पनि उनीहरूको खल्तीमा पैसा फल्छ । बजारभाउलाई बजारमा माग र आपूर्तिले नै बढाएको हो कि कालाबजारीले हो कसैलाई चासो छैन । जगजाहेर छ, नेपालमा कमिसनको चक्कर, अनाचार र गलत काम गर्नेहरू सदैव नै प्रोत्साहित हुँदै आए ।अब प्रश्न उठ्छ, सामान्यत: एउटा उद्योगले ज्याला वृद्धि कतिसम्म गर्न सक्छ ? यो एक पक्ष हो । कालोबजारीका कारण बढेको बजारभाउको भार उद्योगले कतिसम्म बोक्न सक्छ ? त्यो अर्को विचारणीय पक्ष छ । तेस्रो, निजी व्यवसाय भनेको मुनाफाका निम्ति सञ्चालन हुन्छ । मुनाफा नभएमा उद्योग व्यवसाय चल्न सक्दैन । चौथो, आजको अर्थतन्त्र भनेको नवउदारवादी अर्थतन्त्र हो र यसको विकास निकासी व्यापारमा अडेको छ । निकासी व्यापार भनेको विश्व बजारमा स्वदेशी वस्तुको बिक्री बढाउनु हो । त्यसको मतलव हुन्छ, हाम्रा वस्तु सस्तो र गुणस्तरीय भएमा मात्रै उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न सक्छन् । आज हामी विश्वका अन्य मुलुकजस्तै नवउदारवादको गोलचक्करमा छौँ । नवउदारवादले कल्याणकारी राज्यलाई बिदा गर्ने, भएका उद्योगधन्धालाई निजीकरण गर्ने र श्रमिकलाई जतिसक्दो सस्तो ज्यालामा काममा लगाउने कुरामा जोड दिन्छ । सस्तो श्रमले वस्तुको उत्पादन सस्तो हुन्छ भन्छ । त्यसैले विदेशी कम्पनी पनि एसिया र अफ्रिकाका नेपालजस्ता देशमा सस्तो श्रमको खोजी आउने गर्छन् । त्यसबाहेक यहाँको कानुन र त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुने भएकाले पनि आउने गर्छन् । आज नवउदारवादबाट उम्कन सक्ने अवस्था नेपालको छैन । त्यसैले गरिब कामदारको जीविकाको सवालका साथै नेपाली उद्योगको भविष्य पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उद्योग नै नरहे आधा पेट खाना पनि नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले ज्याला वृद्धिलाई मात्रै एकांकी रूपमा उठाउनुभन्दा पनि जीविकाको अर्को पक्ष बजारभाउमा नियन्त्रण पनि ज्यालावृद्धिसँगै त्यति नै सशक्त रूपमा उठाउनु आज अति जरुरी भएको छ । सबैलाई चेतना भया ।
(पौड्याल अर्थशास्त्री हुन्)
Add new comment दोस्रो संविधानसभाका चुनौती
संविधानसभालाई बुर्जुवा लोकतन्त्रको ‘सर्वोच्च रूप’ भनिन्छ । त्यसैले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने ऐतिहासिक कालखण्डमा संसारका विभिन्न देशमा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । परन्तु इतिहासमा संविधानसभा सफल भएकाभन्दा असफल भएका वा हुँदै नभएका उदाहरण धेरै छन् । नेपालमा पनि पहिलो संविधानसभा असफल भएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रवेश गर्दा त्यसका चुनौतीबारे जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक छ । ‘इतिहास दोहोरिन्छ किनकि मानिसले आफ्ना गल्ती दोहोर्‍याउँछन्’ भनेझैँ दोस्रो संविधानसभाको सफलताका लागि हामीले पहिलो संविधानसभाका असफलताका कारण खोतलेर त्यसबाट सही पाठ सिक्नैपर्छ । पहिलो ध्यान दिनुपर्ने तथ्य के हो भने संविधानसभाको पुँजीवादी नारा नेपालमा यहाँको पुँजीपति वर्ग र त्यसको पार्टीले नभएर सर्वहारावर्ग र उसको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको थियो । २००७ सालमा पहिलोचोटि उठेको संविधानसभाको नारा ०१४ सालमा नेपाली कांग्रेसलगायतका पुँजीवादी शक्तिहरूले परित्याग गरेपछि निरंकुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती कालभर त्यो इतिहासको गर्भमा दबिएर बस्यो । ०४६/४७ को आन्दोलनका वेला क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई पुन: उठाउन खोजे पनि त्यो स्थापित हुन सकेन । ०४७ को संविधान राजाद्वारा मनोनीत आयोगले नै बनायो र त्यसलाई पुँजीवादी संसद्वादी शक्तिहरू (दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टहरूसमेत)– ले ‘विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान’ भनेर शिरोधार्य गरे । ०५२ सालदेखि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू (माओवादी)– को नेतृत्वमा सञ्चालित युगान्तकारी सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा नै संविधानसभाको नारा नेपाली राजनीतिमा पुन: एकपटक स्थापित हुन पुग्यो र ०६२/६३ को राजतन्त्रविरोधी संयुक्त जनआन्दोलनपछि सम्पन्न ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’मार्फत त्यसले औपचारिक रूप धारण गर्‍यो । ०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट (माओवादी)हरूलाई अग्रस्थान प्रदान गरेर संविधानसभाको वास्तविक जननी को हो भन्ने कुरा पुष्टि गरिदिए । तर, इतिहासको विडम्बना के भइदियो भने यसबाट पुँजीवादी शक्ति थप सशंकित र असुरक्षित बने र पहिलो संविधानसभाको असामयिक मृत्युका लागि निरन्तर धुपबत्ती गरिरहे, जुन अन्तत: ०६९ जेठ १४ गते तथास्तु बन्न पुग्यो । त्यसपछि पनि उनीहरूले निर्वाचित सरकारद्वारा पहिले ०६९ मंसिर ७ र पछि ०७० वैशाखका लागि घोषित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिन राष्ट्रपति संस्थाको चरम दुरुपयोग गरेर निरन्तर व्यवधान खडा गरिरहे र अन्तत: ०६९ चैत १ गते निमित्त बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारद्वारा हालै ०७० मंसिर ४ का लागि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । यसरी पुँजीपति वर्ग र उसका पार्टीहरूको नै पुँजीवादी लोकतन्त्रको ‘सर्वोच्व रूप’ संविधानसभाप्रति अरूचि र अनिच्छा रहुन्जेल दोस्रो संविधानसभाको सफलताबारे केही आशंका रहिरहनु अस्वाभाविक हुँदैन । दोस्रो कुरा, जडसूत्रवादी कम्युनिस्टहरूको अवस्तुवादी र मनोगत आग्रहले पुर्‍याएको क्षति हो । संविधानसभाको जननी माओवादी आन्दोलनभित्रैको एउटा जडसूत्रवादी सोचबाट ग्रसित समूहले सुरुदेखि नै नेपाली समाजको विकासको यो विशिष्ठ कालखण्डमा संविधानसभाको ऐतिहासिक आवश्यकता र औचित्यलाई राम्ररी ग्रहण गर्नै सकेन र पहिलो संविधानसभाको अवधिभर त्यसले भित्रैबाट अन्तध्र्वस गर्ने धुन्धुकारीको भूमिका निर्वाह गरिरह्यो । नेपाली समाजको वर्तमान विकासको चरण सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त्य गरेर समाजवाद उन्मुख पुँजीवादको विकास गर्ने चरण हो र त्यसलाई अन्तरिम राज्यसत्तमा संस्थागत गर्ने उपयुक्त विधि संविधानसभा हो भन्ने तथ्यलाई त्यो संकीर्ण यान्त्रिक प्रवृत्तिले बुझ्नै सकेन । नेपालको ऐतिहासिक रूपमा सुकेनास ग्रस्त पुँजीपति वर्ग र त्यसका पार्टीहरूले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न नसकिरहेको र संविधानसभाप्रति अरूचि देखाइरहेको अवस्थामा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले सिर्जनशील र कलात्मक ढंगले संविधानसभाको नेतृत्व लिएर त्यसलाई सफल पार्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यथार्थलाई त्यसले आत्मसात् गर्नै सकेन । फस्वरूप त्यसले वेला–कुवेला उट्पट्यांग कुरा गरेर पार्टी नेतृत्वले मिहिनेत साथ बनाएको कतिपय सहमति र सम्झौता भाँड्ने र बहाना खोजीरहेका पुँजीवादी संसद्वादी शक्तिहरूलाई मसला प्रदान गर्ने कार्य गरिरह्यो । पहिलो संविधानसभाको असामयिक अवसानमा यो प्रवृत्ति र शक्तिले जानेर वा नजानेर पुर्‍याएको क्षतिलाई कम आँक्न सकिन्न र हुँदैन । (सामन्ती राजतन्त्रको ऐतिहासिक काल(मृत्यु)को कारक रहने गरेको संविधानसभालाई दक्षिणपन्थी पुनरुत्थानवादी शक्तिले नरुचाउनु स्वाभाविक भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिकालाई यहाँ चर्चा गरिरहनु परेन ।) तेस्रो कुरा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूकै कतिपय अनुभवजन्य सीमा र कमजोरीहरूको समीक्षा गरेर तिनबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ । पहिलो संविधानसभामा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले ४० प्रतिशत सिटसहित अग्रता हासिल गर्नु र सभामा उत्पीडितवर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका प्रतिनिधिहरूको निकै बलियो उपस्थिति रहनु एउटा ऐतिहासिक परिघटना र अवसर थियो । त्यो यथार्थ र अवसरलाई वेलैमा बोध गरेर समयमै त्यो शत्तिलाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिगामी शक्तिहरूको चलखेलबाट सतर्क रहने र विविध मुद्दाहरूमा आवश्यक लचकता र दृढताको संयोजन गरेर पहिलो संविधानसभाबाट वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको सापेक्षतामा अधिकतम प्रगतिशील र अग्रगामी संविधान बनाउन जोड गर्ने कुरामा हाम्रा केही सीमा र कमजोरी रहेको सत्यलाई हामीले विनम्रतापूर्वक स्विकार्नैपर्छ । ऐतिहासिक जनयुद्धलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याएर नयाँ शक्ति सन्तुलनलाई बोध गर्दै शान्ति र संविधानको कार्यनिति लिएर अघि बढिसकेको सन्दर्भमा र जति समय व्यतित हुँदै जान्छ क्रान्तिकारीहरूका लागि परिस्थिति अरू प्रतिकूल बन्दै जान्छ भन्ने ऐतिहासिक अनुभवको आलोकमा हामीले सापेक्ष रूपले आफूअनुकूल पहिलो संविधानसभालाई सफल पार्न जति कौशल पुर्‍याउनुपथ्र्यो त्यो नपुगेकै हो । खासगरी पहिलो संविधानसभाको प्रत्यक्ष मृत्युको प्रमुख कारण बनेको जातीय र क्षेत्रीय पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दामा सभामा दुईतिहाइभन्दा बढी मत हुँदा–हुँदै त्यसलाई वेलैमा संगठित गर्न र वैधानिक प्रक्रियामा लगेर निर्णय गराउन क्रान्तिकारीहरूको सचेतता र पहल नपुगेकै हो । जेठ १४ गते अन्तिम घडीसम्म पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारको प्रयन्न असफल भएपछि र सभाध्यक्षले सभाको बैठक सुरु नगरेपछि क्रान्तिकारीहरूले आफ्नै पहलमा बैठक सुरु गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको भए नेपाली इतिहासले अर्कै मोड लिने थियो कि भन्ने प्रश्न लामो समयसम्म अनुत्तरित नै रहनेछ । पहिलो संविधानसभाको यो कटु अनुभवपछि दोस्रो संविधानसभाका अगाडि दुईवटा प्रमुख चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । पहिलो चुनौती मंसिर ४ गतेको घोषित मितिमा सफलतापूर्वक चुनाव गराउनु हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा वर्तमान अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको हुँदा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्वाध चुनाव सम्पन्न गराउन सामान्यतया कुनै समस्या देखा पर्दैन । परन्तु पुँजीवादी संसद्वादी शक्तिहरूको संविधानसभाप्रतिको ऐतिहासिक अरूचि र अनिच्छा, राजावादी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूको प्रतिशोधात्मक विग्रहकारी हर्कत् मूलधारबाट अलग्एिका जडसूत्रवादी कम्युनिस्टहरूको मनोगतवादी दुस्साहसवादी कामकारबाही र नेपालको अस्थिरतामा आफ्नो सामरिक स्वार्थ देख्ने केही बाह्य शक्तिहरूको गतिविधिका कारणले निर्वाचन प्रक्रियामा अनपेक्षित अवरोध नआउला भन्न सकिन्न । यीबारे वेलैमा सतर्क रहेर संविधानसभाबाटै अग्रगामी निकास चाहने शक्तिहरू एकताबद्ध हुने र सरकारले निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मात्रा बढाउनेलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायका माग वेलैमा सम्बोधन गर्ने हो भने नियतवश निर्वाचन भाँड्ने तत्त्वहरूलाई एक्ल्याएर वेलैमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै समस्या पर्ने छैन । दोस्रो चुनौती निर्वाचित संविधानसभाबाट समयमा अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नु हो । पहिलो संविधानसभाको तीतो अनुभवपछि त्यसका कमी–कमजोरी सुरुमै नहटाइएमा इतिहासको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । परन्तु हेगेललाई उद्धृत गर्दै माक्र्सले भने झैँ इतिहासको पुनरावृत्ति पहिलोचोटी दु:खान्त र दोस्रोचोटि हास्यास्पद मात्रै हुन्छ । नेपालमा संविधानसभा दुई वर्ग र शक्तिबीचको सशस्त्र भिडन्तपछि शान्तिसम्झौताको राजनीतिक आयमको रूपमा आएको हुनाले मूलत: पुँजीपति वर्ग र सर्वहारावर्गले आपसी हितमा अर्को राजनीतिक सम्झौता नगरी सुखै छैन । एकले अर्कोलाई तत्कालै निषेध गरेर अघि बढ्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भइदिएको भए पहिलो शान्ति सम्झौता नै हुने थिएन । त्यसैले वर्तमान शक्ति सन्तुलनको सापेक्षतामा राज्यको संघीय पुनर्संरचनालगायतका मुद्दामा नयाँ सम्झौता गरेर अधिकतम प्रगतिशील र अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नु नै द्वन्द्वरत दुवैपक्षको हितमा हुनेछ । यो सद्बुद्धि दुवै पक्षमा वेलैमा पलाएमा र पहिलो संविधानसभाका प्रक्रियागत त्रुटिहरू सुरुमै सच्चाएमा दोस्रो संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान बन्ने र देश शान्ति तथा समतामूलक सम्वृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने प्रवल सम्भावना रहनेछ । सके सहमति नसके ऐतिहासिक सम्झौताको निम्ति तयार बनौँ । तत्काल दोस्रो संविधानसभामा सफल पार्नुको विकल्प कसैसँग छैन । Add new comment निकासका लागि कांग्रेसको पहलकदमी
लोकतन्त्रमा दलीय भूमिका मुख्य हुन्छ । जनमतलाई कदर गर्नुले मात्र लोकतन्त्रलाई वास्तविक सम्मान गरेको ठहर्छ । तर, अहिले यी दुवै अवस्था छैन । चार दलले आफ्नो स्वाभाविक क्षमता नदेखाउँदा गैरदलीय व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्‍यो । अन्य केही पार्टीले विरोध गरेको जस्तो गरे । तर, कांग्रेसमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यले लिखित रूपमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व नदिन गरिएको आग्रह सुनिएन । विरोध र असन्तुष्टिका बाबजुद हामी पार्टीले रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिन गरेको निर्णय मान्न बाध्य भयौँ । बाध्यात्मक रूपमा स्विकारिएको भनिएको छ । तर, रेग्मीले राष्ट्रको हितमा काम गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषयसँग उनको सफलता वा असफलता देखिन्छ ।नेपालमा दल अनि नेताको अभाव पनि होइन । तर, किन गैरदलीय व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिने चेष्टा गरियो ? कांग्रेस, एमाओवादी, एमाले र मधेसवादी दलले क्षमता देखाएर मात्र निर्णय गर्न सकेका होइनन् । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति चार दलले मात्र गरेको भन्न मिल्दैन । सम्पूर्ण विधि र विधानलाई कुल्चँदै विदेशी शक्तिको भरमा उनीहरूलाई रोजियो । यसले नेपालीको भावनालाई अपमान गरेको छ । मुलुकलाई नै अपमान गर्ने गरी भएको यस्तो नांगो हस्तक्षेपलाई चार दलले किन स्विकारे ? यो अहिलेको अहं सवाल हो । ठाडो रूपमा विधि उल्लंघन गर्दै मुलुक अराजनीतिक बाटोतर्फ अघि बढिरहँदा अब कांग्रेस चुप लागेर बस्नु हुँदैन । लोकतन्त्रलाई नै आफ्नो आदर्श मान्ने पार्टी कांग्रेसले अब गल्तीलाई स्विकार्न ढिलाइ गर्न हुन्न । उग्र कम्युनिस्टलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने हामी नै हौँ । तर, हामी कता–कता अल्मलिएका छौँ । हराएका छौँ । कम्युनिस्टलाई सहमतिमा ल्याउन फकाउन, सहकार्य गर्न तयार भयौँ । तर, उनीहरूलाई बुझ्ने कोसिस गरेनौँ । उनीहरू कुन–कुन शक्तिकेन्द्रबाट चलेका छन् भन्ने बुझ्न हाम्रो नेतृत्व असफल रह्यो । अब कांग्रेसको चेत खुल्नुपर्छ । अब कम्युनिस्टले गरेनन्, मधेसी दलले गरेनन् भनेर उम्कने वेला छैन । राष्ट्रवादी र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टी कांग्रेसले अब हिम्मत गर्नुपर्छ । अब पनि कांग्रेस चुप लागेर बस्ने हो र आफैँभित्र अल्मलिने हो भने राष्ट्रियता र लोकतन्त्र नै समाप्त भएर जान्छ । देश अहिले त्यही बाटोमा अघि बढेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा अग्रसरता लिनुअघि पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । तर, हाम्रो पार्टीमा केही नेतालाई इच्छा लाग्दा मात्र पार्टी निर्णय भन्दै विधि, विधान र प्रक्रियालाई लत्याउने काम भएको छ । पार्टीका जिम्मेवार सदस्यको धारणा र माग एकातिर अनि कोठामा बसेर गरिने निर्णय अर्कोतिर भएको छ । हाम्रो नेतृत्व आधिकारिक पार्टी निर्णयले राजनीति गरिरहेको छैन । बाध्यतामा परेर निर्णय गरियो भन्ने जस्ता तर्क राखेर अब पार्टी नेतृत्व अघि बढ्न मिल्दैन । हामीले पहिले आफू हारेर भए पनि संविधानसभा सफल बनायौँ । लचिलो हुनुपर्ने ठाउँमा लचकता पनि देखाएको हौँ । तर, खै अहिले अन्य दलसँगै हामी जवाफदेही भएको ? अब जनताको माझमा जानुको विकल्प छैन कांग्रेससामु । संविधानसभापछि कम्युनिस्टका चार–चारवटा सरकार बने तर खोई संविधान ? के पाए जनताले ? के कांग्रेसले अब लोकतन्त्रवादी दल भनेर मात्रै गर्व गर्न मिल्छ ? अब अत्यन्तै गम्भीर ढंगले कांग्रेसले पहलकदमी लिनुपर्छ अन्यथा मुलुकले निकास पाउन गाह्रो छ । अन्य दलले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैनन् भन्ने संविधानसभापछिको राजनीतिक अभ्यासले देखाइसक्यो । कम्युनिस्ट र मधेसवादी दल मिल्दा पनि सरकार सञ्चालन र राजनीतिक निकासमा देखिएको असफलतालाई कांग्रेसले अब सफलतामा परिणत गर्न लाग्नुपर्छ । यतिखेर असन्तुष्टि र विरोधका बाबजुद पनि हामी पुन: संविधानसभा निर्वाचनमा गर्न जाँदै छौँ । तर, पहिलो संविधानसभा असफलताको कारण खोजी गरिरहेका छैनौँ । संविधानसभा दुई वर्षका लागि थियो । तर, चार वर्ष बनाउँदा पनि किन संविधान बनेन ? असफल हुनुको कारण पहिले खोजिनुपर्छ । नेपाली जनताको भाग्य र देशको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कोको जिम्मेवार बनेनन् ? कसकसले गल्ती गरे ? यो खोजी नगरी पुन: संविधानसभाकै निर्वाचन भए पनि संविधान फेरि पनि बन्दैन । गल्तीको बिन्दु पहिल्याई व्यवहारमा प्रतिबद्धता जनाएर मात्र संविधान निर्माणतिर लाग्नुपर्छ । अन्यथा पहिले निर्वाचन र संविधान दुवै जटिल बन्छन् । २००७ सालदेखिको राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्न संविधानसभामा जाने भनियो । तर, संविधानसभापछि कस्तो संघीयता र शासकीय स्वरूप हुने भन्नेमा सहमति गरिएन । संघीयतामा नै दलबीच कुरा बाझिँदा संविधान नबनेको दृष्टान्त हुँदाहुँदै हामी फेरि संघीयताका आधारमा सहमति नगरी फेरि जोखिम त मोल्दै छैनौँ ? यो विचारणीय पक्ष हो । त्यसैले हिजो गरेका गल्ती सच्चाउने चरित्र देखाउनै पर्छ । हामीले यति पनि गर्न सकेनौँ भने मंसिरमा पनि संविधानसभाको चुनाव हुन गाह्रो छ । विधि–विधानलाई कुल्चँदै अघि बढे पनि दलहरू राजनीतिलाई सहज रूपान्तरण गर्ने दिशातिर अघि बढेका छैनन् । निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता अहिलेको आवश्यकता हो । सहज निर्वाचन र संविधान लेखनका लागि असन्तुष्ट दललाई वार्तामा ल्याउन आवश्यक पहलकदमी चार दलबाट देखिएन । यतिखेरको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा एमाओवादीबाट फुटेको नेकपा–माओवादी भएको छ । एमाओवादी फुटेपछि मोहन वैद्यतिर पनि ९० जनाजति पूर्वसभासद रहेको बताइन्छ । उनीहरूलाई दलीय हैसियत दिइएन । तर, ५० सिट पनि नभएका विजयकुमार गच्छदारहरूले मात्र किन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताकै जत्तिको हैसियत पाए ? यसको जवाफ चार दलल दिनुपर्छ कि पर्दैन ? अब कांग्रेसले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध रहेको व्यवहारले देखाउनुपर्छ । देश सञ्चालन विधि र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा आधारित भएर मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा अडान लिनुपर्छ । त्यस्तै, नेपालको राष्ट्रियतालाई ख्याल गर्दै आवश्यकताअनुसार मात्र विदेशीसँगको सम्बन्धलाई जोड दिनुपर्छ । अन्यथा दलहरूले देखाइरहेको गैरजिम्मेवारपना झनै बढेर जानेछ । त्यस्तै, विदेशीको इसारामा सत्ताका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने शक्तिको नांगो नाच टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प हुनेछैन ।
(भण्डारी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
Add new comment मधेसी दलहरूमा नेता खोसाखोस
अहिले मधेस सबैको आकर्षण बनेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण भयो भने आधाभन्दा बढी क्षेत्रहरू मधेसका २२ जिल्लामै रहनेछन् । त्यसैले जनाधार भएका र चुनाव जित्न सक्ने सम्भावित नेताहरू अहिले विभिन्न मधेसवादी दलहरूमा खोसाखोस हुन थालेका छन् । खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूले एक पार्टीका नेता अर्को पार्टी भित्र्याउने अस्वस्थ्य होडबाजी सुरु गरेका छन् । कुन पार्टीले कुन नेता भित्र्याउने भन्ने दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै सुरु भएको छ । मधेसी दलहरूको एउटै मोर्चा बनाउने भन्ने नारा नारामै सीमित हुन थालेको छ । उनीहरू त जसरी भए पनि चुनाव जित्ने र बढीभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्् । केही मधेसवादी नेता एकातिर मधेसी दलहरूको मोर्चा बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्् । तर, अर्को पार्टीका नेतालाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन अनेक ‘आइडिया’ पनि लगाइरहेका हुन्छन् । मधेसी जनतामा अलि लोकप्रिय मानिएका मधेसवादी नेताहरू अहिले मधेसवादी दलहरूमा मोल बढाबढमा छन् । खासगरी दोस्रो तहका नेताहरू कुन पार्टीबाट टिकट पाए चुनाव जितिन्छ, त्यही पार्टीमा छिरिहाल्ने प्रवृत्ति बढको छ । आखिर सिद्धान्त एउटै छ, नारा एउटै छ र उनीहरूले उठाएको मुद्दा पनि एउटै छ भने किन सधैँ एउटै पार्टीमा बसिरहने ? जहाँ जाँदा अवसर पाइन्छ, त्यहाँ छिरिहाल्ने रोग अहिले मधेसवादी दलहरूमा बढी देखिएको छ । बाराबाट चुनाव जितेका जय प्रकाश यादवले एकैपटक तीनवटा मधेसवादी दलहरूसँग पार्टी प्रवेश गर्नका लागि बार्गेनिङ गरे । त्यतिखेर उनी तमलोपामा थिए । राजकिशोर यादवको गणतान्त्रिक फोरममा छिर्नका लागि उनले राजकिशोरसित सँगै बसेर फोटो पनि खिचाए । राजकिशोर र जय प्रकशसँगै बसेको र हात मिलाएको फोटो राजकिशोरका आफन्तले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरे । जय प्रकाश गणतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गर्न लागेको भनेर उनले चर्चा पनि गरे । भोलिपल्ट वीरगन्जमा राजकिशोरले जय प्रकाशलाई माला लगाएर पार्टीमा भित्र्याउने कार्यक्रम थियो । तर, त्यसको अघिल्लो दिन नै जय प्रकाशले आफू गणतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गर्ने हल्ला निराधार भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले । त्योभन्दा पहिले उनले शरत्सिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक फोरमसँग पार्टी प्रवेशका लागि अनौपचारिक कुराकानी अघि बढाएका थिए । अहिले उनी महेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । सुरुमा उनी महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तमलोपामा आबद्ध थिए । मधेसवादी दलमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् । मधेसवादी दलहरूले उठाउने गरेको सिद्धान्त र मुद्दाहरू फरक–फरक भएको भए सायद नेताहरूलाई पार्टी बदल्न यति सजिलो हँुदैनथ्यो होला । तर, नाम पनि उस्तै–उस्तै छन् र उनीहरूले उठाएका कार्यक्रम पनि उस्तै–उस्तै छन् । त्यसैले उनीहरूलाई पार्टी फेर्न निकै सजिलो भएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरमबाट फुटेपछि फोरम शब्द राखेर अरू दुईवटा पार्टी लोकतान्त्रिक फोरम र गणतान्त्रिक फोरम दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी तमलोपाबाट फुटेर महेन्द्र यादवलगायत नेताहरूले तमलोपा नेपाल नाम राखे । यसैगरी, सद्भावनाबाट फुटेका संघीय अनील झाले आफ्नो पार्टीको नाम संघीय सद्भावना राखे । रामनरेश यादवले फेरि सद्भावना पार्टी फुटाए । उनले पनि आफ्नो पार्टीको नाम राष्ट्रिय सद्भावना राखे । पार्टी सानै भए पनि उनी एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएका छन्् र मधेसी दलहरूको एउटै मोर्चा बन्नुपर्छ भनेर जहाँ गए पनि कुरा उठाउने गर्छन् । सद्भावना आनन्दीदेवीका नाममा त चारवटा पार्टी छन् । कसलाई आधिकारिकता दिने भन्नेमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत हैरान भइसकेको छ । आधिकारिकताको विषयमा विगत केही वर्षदेखि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिरहेका छन् । तैपनि सबै सद्भावना आनन्दीदेवीहरूले आफू नै आधिकारिक सद्भावना आनन्दीदेवी भएको दाबी गरिरहेका छन् । सद्भावना आनन्दीदेवीबाट फुटेको विकास तिवारीले त पार्टीको नाममै गजेन्द्रवादी राखेका छन् । सद्भावना आनन्दीदेवीको पुरानो चुनाव चिह्न पन्जा छाप हो । पन्जा छाप आफ्नो हातमा पार्नका लागि सद्भावना आनन्दीदेवी नामधारी पार्टीहरूले उत्तिकै लडाइँ गरेका छन् । मधेसका लागि भनेर थरीथरीका नाम छन् । तर, प्रत्येक नाममा मधेस शब्द भने झुन्डिएकै हुन्छ । क्रान्तिकारी नारा राख्न दलहरूबीच होडबाजी नै हुन्छ । कुनै मधेसी नेता आज एउटा पार्टीमा हुन्छ भने भोलि अर्को पार्टीमा पुगिसकेको हुन्छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा मधेसकेन्द्रित ३० वटा दल दर्ता भएका छन् । यीमध्ये डेढ दर्जन दल मधेसमा क्रियाशील छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदार अहिले अन्य पार्टीका नेताहरू आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन बढी नै क्रियाशील छन् । तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका नेता ओमप्रकाश यादव गुल्जारी भर्खरै मात्र सद्भावनामा प्रवेश गरेका छन् । गुल्जारी सुरुमा फोरम नेपालमा थिए, त्यसपछि गणतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरे । गणतान्त्रिक फोरम पनि उनलाई चित्त बुझेन । उनी त्यसपछि जेपी गुप्ताले नेतृत्व गरेको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानमा क्रियाशील भए । त्यसपछि उनलाई गुप्ताको साथ पनि मन परेन । अहिले उनले राजेन्द्र महतोलाई रोजेका छन् । महतोको पार्टीबाट चुनाव लडे सुरक्षित भइन्छ भन्ने उनलाई लाग्यो । शरत्सिंह भण्डारीको पार्टीमा रहेका अर्का ओमप्रकाश यादवले भण्डारीलाई साथ छोड्न तयार रहेको चर्चा मधेसवादी दलहरूभित्र व्यापक छ । उनले सुरक्षित पार्टी खोज्दै छन् । लोकतान्त्रिक फोरम, तमलोपा या फोरम नेपालमध्ये कुनै एक पार्टी उनको रोजाइमा पर्छ । सबै मधेसवादी दललाई एउटै मोर्चा बनाउन भनी तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अघिल्लो हप्ता गरेको चियापान कार्यक्रमपछि नेताहरूले दल फेर्ने क्रम झनै बढ्यो । चियापानपछि नै संघीय सद्भावनाका पूर्वसभासद् महेश यादव र देवेन्द्र यादव पनि फोरम नेपालाम प्रवेश गरेका छन् । गुल्जारीको प्रवेश पनि चियापानपछि नै थियो । मधेसवादी नेताहरू एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका समचार यतिखेर दिनहुँ आउन थालेका छन् ।फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक फोरमबाट करिमा बेगमलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएदेखि यो अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् । भरत विमल यादव, बबन सिंहसमेतलाई उनले आफ्नो पार्टीमा ल्याउन सफल भएका छन् । केही दिनअघि तमलोपा नेपालबाट गोविन्द चौधरी, चन्दन साह र अरबिन्द साह संयुक्त रूपमा लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरेका थिए । लोकतान्त्रिक फोरमबाट अलग भएर मधेस क्रान्ति फोरम गठन गरेका सञ्जय साह पुन: लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरेका छन् । तमलोपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादव यस मामिलामा पछि छैनन् । उनले फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य शिवपुजन यादव र तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य जय प्रकाश यादवलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन सफल भएका छन्् । फोरम नेपालका युवा नेता योगेन्द्र यादव सद्भावनामा प्रवेश गरेका छन् । तमलोपा नेपालका प्रवक्ता रामआशिष गुप्ता सद्भावनामा प्रवेश गरेका छन् । यसैगरी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य कैलाश महतो, तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य शत्राजित यादव, तमलोपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य केदारनाय यादव, अनिश अन्सारी र विश्वेश्वर रजक सद्भावना पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । यसैगरी, संघीय सद्भावनाका खोभारी राय तमलोपा नेपालमा प्रवेश गर्ने तयारी गर्दै छन् । लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य शंकरलाल चौधरी केही दिनअघि तमलोपामा प्रवेश गरेका छन् ।मधेसवादी दलका नेता एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने र दलका अध्यक्षहरू पनि अर्को पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउने लहर अझै जारी रहने छ, मधेसवादी दलहरूमा । Add new comment थप लेखहरु...
चार दलको सिन्डिकेटमा अल्झिएको चुनाव अझै १६ लाख बालश्रमिक सहमतिको बाधक माओवादी
कमरेडहरू कसरी क्रान्तिकारी ? माहोल बिगारिरहेका छन् चार दल
पुष्पलाल, मदन र प्रचण्ड